Volocopter Chengdu: ekwuputala nkwekọrịta ụgbọ elu ọhụrụ nke German na China
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Volocopter Chengdu: ekwuputala nkwekọrịta ụgbọ elu ọhụrụ nke German na China
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
UAM na-ezo aka n'ụdị ụgbọ njem obodo mepere emepe nke na-eji ụgbọ elu eletrik kwụpụ na ọdịda (eVTOL) ịkwaga ndị mmadụ ma ọ bụ ngwongwo n'ime ọdụ ụgbọ elu obodo na ime ime obodo. Ọ na -enye aka belata nsogbu ahụ n'okporo ụzọ obodo na -ejupụta na ya ma na -enye ohere ka ndị mmadụ na ngwongwo rute ebe ha na -aga ngwa ngwa yana enweghị nsogbu.
Ndị otu Volocopter nke Germany jikọtara ya na Geely Holding Group iji guzobe njikọ aka na Chengdu, China.
Njikọ aka a ga -ahụ maka mmepụta na ọrụ ahịa nke ngwaahịa Volocopter n'ahịa China.
Njikọ aka a na -eme atụmatụ inye aka kwalite mkpagharị ikuku nke obodo ukwu na China n'ime afọ atọ ma ọ bụ ise na -abịanụ.
Volocopter nke Germany, onye ọkachamara n'ichepụta ụgbọ elu ikuku na-arụ ọrụ, yana onye enyemaka ọkwa nke abụọ nke Geely Holding ekwuputala ụlọ ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ ejikọtara ọnụ, aha ya bụ Volocopter (Chengdu) Technology Co., Ltd., ma ọ bụ Volocopter Chengdu na nkenke. Otu.
Njikọ aka a ga -adị na Chengdu, isi obodo mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ China Sichuan, ọ ga -ahụ maka mmepụta na ọrụ ahịa nke ngwaahịa Volocopter n'ahịa China.
Volocopter Chengdu debanyekwara iwu na Volocopter maka ụgbọ elu 150, gụnyere ngwa agha ụgbọ elu na -enweghị ụgbọelu na ụgbọ elu mmadụ.
A ga -emepụta ụgbọ ala ikuku na akụkụ ha na Hubei Geely Terrafugia, ụlọ ọrụ na -emepụta Geely na China, dịka njikọ aka.
Volocopter Chengdu ga -agakwa ngosi ngosi China International Aviation na Aerospace nke 13 (Airshow China) na Septemba 28.
Florian Reuter, onye isi oche nke ụlọ ọrụ UAM kwuru, "Taa bụ akara ọzọ dị mkpa na njem anyị iji weta mbugharị ikuku ikuku dị ọnụ ala na China. Volocopter.
Volocopter bụ onye mbụ na -emepụta ụgbọ elu eVTOL naanị n'ụwa nke nwetara nkwado na mmepụta site na Agencylọ ọrụ nchekwa ụgbọ elu nke European Union.